Otu esi etinye Discord na Linux Mint 20 - LinuxCapable
September 23, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ngwugwu Discord .deb
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye onye ahịa Discord na Linux Mint 20.
OS akwadoro: Linux Mint 20.+
Nke mbụ, melite gị Mint Linux Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Iji wụnye Discord, ị ga-achọ ibudata ngwugwu .deb na weebụsaịtị Discords. Gaa leta ibe nbudata dị ka ị nwere ike ịchọ njikọ emelitere. Ugbu a, ụdị 0.0.16 bụ nke kachasị ọhụrụ; Ọ bụrụ na nke a agbanweela, ị nwere ike gbanwee nọmba iwu ka ọ dabara na ụdị ọhụrụ ahụ.
Ugbu a, budata ngwugwu Discord .deb site na iji iwu wget:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Mint 20 Mint Linux iji meghee ụzọ: Ogwe ọrụ> Ngwa> Banyeịntanetị > Nsogbu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa.
Ugbu a mepee Discord, ị ga-abịa na ibe nbanye, ma mepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri akaụntụ dị adị, nke ahụ bụ ya; ị tinyela Discord na Linux Mint 20 nke ọma.
Nkuzi a akọwapụtala otu esi etinye Discord na Linux Mint 20. Discord bụ ma bụrụ ọnụ ọgụgụ 1 egwuregwu ikpo okwu maka obodo ndị dị n'ịntanetị maka afọ ndị na-abịa. Agbanyeghị, TeamSpeak kwadoro onwe ya na-alọghachi. Ọdịnihu ga-ekpebi ma Discord nwere ike idobe ọchịchị ya, nyere ihe gbasara nzuzo ụbọchị ndị a.
Categories Mint Linux Tags Nsogbu, Mint 20 Mint Linux Mail igodo